Rosiana Mpikatroka Mafàna Fo Voasazy Taona Roa Noho Ny ‘Antso Hanao Hetsika Mahery’ Nalefany Taminà Tambajotra Sosialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Desambra 2015 16:39 GMT
Vakio amin'ny teny русский, English, বাংলা, Français, Español, English
Darya Polyudova nanao fijaridinan'olon-tokana. Sary avy amin'ny pejiny VKontakte.
Nohelohin'ny fitsaràna iray tao amin'ny distrikan'i Krasnodar i Darya Polyudova, mpikatroka iray mafàna fo, noho ny “antsony ho an'ny daholobe nataony tao amin'ny media sosialy hirona amin'ny fisaraham-bàzana sy hanao mahery fihetsika”, ka nanasazy azy handia taona roa tany amin'ny toby iray fanefàna sazy (fanarenana).
Tany amboalohany dia nangatahan'ny tao amin'ny Fiampangàna ny hanomezana an'i Polyudova sazy 3 taona sy tapany, araka ny tatitra iray an'ny Ovdinfo.org.
Tany am-piandohana, nenjehana noho ny fiantsoana ny olona hanao hetsika manohintohina ny fitambaran'ny Federasiona Rosiana i Polyudova (araka ny Toko faha-280.1 amin'ny lalàna Rosiana momba ny heloka bevava, tovana tamin'ny 2014), hatramin'ny fantsoana ny olona hanao mahery fihetsika (ampahany 1 ary ny 1 amin'ilay toko faha- 280 amin'ny fehezan-dalàna momba ny heloka bevava), nahitàna ireo karazana antso tahaka izany tany anaty tambajotra sosialy.
Ny 4 Aprily 2014, nandeha nanatontosa fijaridinan'olon-tokana i Polyudova niaraka taminà sorabaventy nivaky hoe “Tsy ady amin'i Okraina, fa revolisiona ato anatin'i Rosia! Tsy ady, fa revolisiona!” ary taty aoriana kely dia nandefa tao amin'ny momba azy ao amin'ny pejiny VKontaktee ny sariny niaraka tamin'ilay soravabaventy izy. Ny 16 Jolay, namerina nandefa lahatsoratra iray tao amin'ny pejiny VK i Polyudova, izay niaty ireto teny ireto “Ry Vahoaka, mifohaza!.. Ahoana isika no tsy mahavita manaisotra an'i Poutine, ary avy eo manorina revolisiona sosialista iray?!!! Ampy izay ny torimaso! Fotoana izao handehanana mivoaka mankeny amin'ny kianja sy manongana ity fitondràna ity!” Milaza i Polyudova fa tsy nanao afa-tsy ny namerina fotsiny izay notenenin'ny hafa izy ary tsy nanao fanehoankevitra manokana avy aminy.
Ny 5 Aogositra 2014, nandefa lahatsoratra iray hafa tao amin'ny VKontakte izy niantso “ny hiadiana amin'i Poutine miaraka amin'ny fitaovany ihany” sady nitanisa izy hoe, araka ny tantara, ny faritra Kiobàna fehezin'ny Rosiana dia toy ny faritàny an'ny foko Okrainiana .
Natomboka tamin'ny Aogositra 2014 ny raharaha heloka bevava anenjehana an'i Polyudova, taorian'ny nandraisany anjara tamin'ilay hetsipanoherana famoriambahoaka nantsoina hoe “Diabe ho fametrahana ny Federasiona Kiobàna”. Saingy ny fampiharana ny lalàna, araka ny fizotrany, dia naka ilay olan'ny lahatsoratra tao anatin'ny media sosialin'i Polyudova momba ny lahatra ho an'ireo foko Okrainiana tany amin'ilay faritra Kiobàna. Natsofoka taty aoriana ireo vesatra momba ny fanaovana mahery fihetsika, ary voaheloka tamin'ny fomba ofisialy i Polyudova tamin'ny Janoary 2015.
Nandia fitàzonana am-ponja nandritry ny volana enina talohan'ny fitsarana azy ilay mpikatroka mafàna fo ao Krasnodar, nanomboka ny Septambra 2014, ary navotsotra ny Febroary 2015, saingy voaràra tsy hahazo mivoaka any ivelany. Talohan'io dia efa nomena sazy ara-pitantànana ihany koa izy noho ny lahatsoratra hafa nalefany tamin'ny media sosialy.
i Pavel Chikov, mpandresy lahatra momba ny Zon'Olombelona, niantso an'i Polyudova ho mpifonja noho ny resaka politika ary nilaza ny didy nomena azy ho ampahany amin'ny fironana hanao sazy henjana ho an'ireo tsy mitovy hevitra/mpanohitra ao Rosia, nanomboka tamin'i Ildar Dadin izay vao haingana no voaheloka hifonja taona telo any ambadiky ny fefy vy noho ny nanaovany hetsipanoherana tsy nahazoana alàlana.
Nalefan'ny fitsaràna hifonja mandritry ny taona roa any aminà fonja fanefàna sazy/fanarenana i Darya Polyudova. Gadra iray vaovao noho ny resaka politika ao Rosia.
Amin'ny sazy voalohany avoaka dia ahazoana fampidirana am-ponja sazy mihatra ireo toko vaovao ao anatin'ilay fehezan-dalàna momba ny heloka bevava. Dadin sy Polyudova.
Talohan'ny nanambaràna ny didim-pitsaràna, nolazain'i Polyudova tamin'ny mpanangom-baovao iray avy amin'ny Radio Liberty fa tsy niandrandra ny ho afaka madiodio izy no sady tsy natahotra ny hiditra am-ponja.